I-IDRA-21 Umthamo wePowder, isiqingatha-sobomi, izibonelelo, Iziphumo ezichaphazelekayo, kunye noPhononongo
Yintoni i-IDRA-21 powder?
Ngumntu ngokupheleleyo ukuba uhlale ujonge into enokukunika umda. Ukuphucula ukusebenza komntu, uninzi ngoku lubhenela kwiziyobisi ezifanelekileyo, ezaziwa ngcono ngokuba zii-nootropics. Mhlawumbi uye wahlangabezana nezongezelelo ezininzi ezithi zikhuthaze ukusebenza kwengqondo yakho kodwa ngaba uyekile ukuzibuza ukuba yeyiphi esebenzayo? IDRA-21 sisiyobisi esivela kubume bemichiza ye-benzothiadiazine. Kukho amabango athi i-IDRA-21 ihambelana ne-Aniracetam, enye i-nootropic ephindwe kathathu ibuthathaka kune-IDRA-21. Uya kuqaphela ukuba i-IDRA-21 yi-nootropic ehamba ngentetho. Ngenye yezona zi-nootropics ezilungileyo kakhulu ezipakisha i-punch xa kuziwa ekuphuculeni imemori yakho, inkuthazo, iinkqubo zokucinga, kunye nokuphucula imveliso yakho. Intsha kwintengiso, kwaye uphando lusaqhubeka ukuqonda ngakumbi 22503-72-6 Iziphumo kwimemori, amandla okuqonda, kunye nokubuyisa umva kusilelo lokuqonda.
Isebenza njani i-IDRA-21?
Njengesiyobisi se-ampakine, i-IDRA-21 isebenza ngokumodareyitha okuqinisekileyo kwe-glutamate AMPA receptors kwingqondo. Kuba ii-AMPA receptors zibangela ukuhanjiswa okukhawulezileyo kwe-synaptic, kukho ukonyuka kwamandla okonwabela amandla e-synaptic. Ikwabizwa ngokuba yi-allosteric activation.
Umthamo ophakanyisiweyo / Usebenzisa ukufundiswa kwe-IDRA-21
Nangona i-IDRA-21 ihlolwe kuphela kwizilwanyana, abantu abaninzi bayisebenzisile, kwaye abanye isekhona. Ukuba yi-nootropic eyaziwayo, abantu abaninzi baye bathetha malunga neyona dosi efanelekileyo inika iziphumo eziphezulu. Imithombo emininzi iphakamisa ukuba Idosi ye-IDRA-21 kufuneka inyuke ziye kwi-10mg kwisithuba seeyure ezingama-48. Ungayithatha nokuba ngaphambi okanye emva kokutya kuba inyibilikiswa ngamanzi kwaye kufuneka iglasi kuphela yamanzi okusela. Ukuba yinto yakho yokudibana okokuqala nale nootropic, kuyacetyiswa ukuba uqalise kwi-IDRA-21 dosage ephantsi. Ungawonyusa kancinci kancinci kancinci xa uqinisekile ukuba umzimba wakho awuphenduli kakubi ngokusetyenziswa kwawo. I-IDRA-21 isitaki se-nootropic Ngaphandle kwento yokuba unokusebenzisa i-IDRA-21 ngokwakho, unokukhetha ukuyidibanisa nezinye ii-nootropics okanye izongezo zokufumana izibonelelo zokuqonda ngakumbi. Ngenxa yesikhuthazo esinokubakho kunye nokusilela kophando olwaneleyo, kuya kufuneka ucothe kuyo. Asinakucebisa ukubekwa kwe-IDRA-21 ngazo naziphi na ezinye iziyobisi ze-ampakine ezinje ngeAniracetam. Ezinye ii-nootropics ezonyusa amanqanaba e-glutamate kufuneka ziphetshwe.
Zithini izibonelelo ze-IDRA-21?
Nawuphi na umntu okhuthazwayo uye wanyusa imveliso. Thatha, umzekelo, ukuba kufuneka uqhubeke nokwenza okusemandleni akho kwimisebenzi yemihla ngemihla, unokwenzeka ukuba uya kuphumelela iinjongo zakho. Kwelinye icala, ukuba awunayo intshukumisa yokwenza nawuphi na umsebenzi, wonakalisa amatyala akho okukhula. Enye ye Izibonelelo ze-IDRA-21 kukuba kukhokelela kwinkuthazo ephuculweyo ethi, ikhuthaze ukusebenza kakuhle kunye nokunyusa imveliso. Ngenxa yoko, unokufezekisa iinjongo zakho ngaphandle kokuziva ngathi uzityhalela phezulu.
Ukunyusa ukuchaneka komsebenzi
Sonke siyayazi ukuba iziphumo ezigqibeleleyo zifuna okungaphezulu komzamo nje. Oku kuthetha ukuba unokubeka konke kodwa uqonde ukuba awuyifumani i-100% yokuchaneka obuza kufuna ukufezekisa. Into emnandi yile IDRA-21 powder ikuqinisekisa ngogxininiso kunye nengqwalaselo oyifunayo yokufezekisa iziphumo ngqo ozifunayo. Ukudityaniswa nokusebenza nzima, unokuqiniseka ukuba uya kufumana amanqaku aphezulu ngokuchanekileyo.
Ukunyuka kwenkumbulo yexesha elifutshane
Njengoko usaluphala, uyakuqonda ukuba inkumbulo yethu yexesha elifutshane ayisabukhali njengangaphambili. Uqala ukulibala nezona zinto zibonakalayo, kwaye ukumelana noku, ukwenza amanqaku amafutshane okanye amanqaku abe ngumhlobo wakho. Ngelixa unokuziva ukhathazekile ukuba inkumbulo yakho yexesha elifutshane ayinakuphinda iphinde ibe njalo, akukho mfuneko yokothuka. Kungenxa yokuba unokonyusa inkumbulo yakho yexesha elifutshane naliphi na ixesha ofuna ngalo. Ukusetyenziswa kwe 22503-72-6 yenye yeendlela ezifanelekileyo onokuthi jongana neengxaki zexesha elifutshane zokulahleka kwememori. Akumangalisi ukuba isetyenziselwe ukunyanga i-amnesia. Ngokusetyenziswa kwayo, unokukhumbula into oyifunayo ebomini bakho bemihla ngemihla.
Ineempembelelo ezithile kunyango ngoxinzelelo
Ngaba uziva ulusizi, usoloko unxunguphalo, okanye uneengxaki zoxinzelelo? Ngaba ukuthanda kwakho ukutya kunciphile? Ngaba usokola ukulala? Ukuba impendulo yakho ngu-ewe, ngoko unokuba uphethwe kukudakumba. Njengoko kusenokwenzeka ukuba uyazi, ukudakumba kunokuchaphazela kakubi ubomi bakho, kukwenze ungafikeleli kumandla akho apheleleyo. Ngethamsanqa, akukho nzima ukuboyisa ngokusetyenziswa kwe-IDRA-21. Ngokunika amandla ingqondo yakho, inokukunceda ukuba ulwe nokudakumba. Kwakhona, inesiphumo sonyango esizakukwenza uzive ubhetele ngalo naliphi na ixesha uziva ngathi ixhala liyakhwela ngaphakathi.
Ukonyusa ukugxilwa kwengqondo
Ukubanakho ukuhlala umamele ixesha elide ungaphazamiseki kubaluleke kakhulu ukuba ufuna ukusebenza ngokugqwesileyo. Ukuba uyaqonda ukuba ixesha lokuthathela ingqalelo liya lisebenza, ungasebenzisa i-IDRA-21. Ukusuka kuvavanyo lwe-IDRA-21 kwi-Intanethi, kukho amabango okukunceda uhlale emsebenzini kwaye unike ingqalelo ekufaneleyo. Kungenxa yokuba kuyanceda ukuba ujolise engqondweni nangazo zonke iziphazamiso ngaphandle.
Ukwanda kwembono yomntu
Ukuqonda okuvakalayo kunokuchazwa njengoluvo lwesithandathu ekufuneka wonke umntu enalo. Kukukwazi ukubona izinto kunye nokuqonda ihlabathi elijikeleze wena ngendlela ebhetele. I-IDRA-21 ingaphezulu kweembono zakho zeemvakalelo zikwenza ubukhali.
Inceda kunyango lweemeko ezithile ze-neurological
Namhlanje, ukusetyenziswa kwe-IDRA-21 kubandakanyiwe kunyango nokhathalelo lwezigulana ezinengxaki yeemvakalelo ezinje ngenkqubo yokwaluphala, ukonakala kwengqondo, isifo se-Alzheimer, kunye nesifo sikaParkinson.
Ubuchule bethu bokuqonda abulungelelani. Ngokokuba abantu abaninzi bavame ukucinga ukuba iintlobo zethu zemvelo zibachonga, kukho iindlela onokuthi ufezekise amanqanaba aphezulu okuqonda. I-IDRA-21 yenye yeziphuhlisi zesikhombisi esihambisa ngokuphucula ubukrelekrele bomntu.
Iziphumo ezibi ze-IDRA-21
Uninzi lwabantu luhamba rhabaxa malunga neli chiza kuba alinazo iziphumo ebezingalindelekanga. Ngomthamo ophakanyisiweyo, kunokwenzeka ukuba ungazukudibana nazo naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ze-IDRA-21. Nangona kunjalo, abanye banokufumana iziphumo ebezingalindelekanga ezinxulumene nokusetyenziswa kwee-nootropics okanye ii-ampakines. Injalo IDRA-21 Iziphumo ebezingalindelekanga zibandakanya;
Ukonyuka kwe-glutamate neurotransmission ihlala ibangela ezi ziphumo ze-IDRA-21. Ubukhulu becala, oku kwenzeka kwabo banomsebenzi we-AMPA onamandla kwaye abadingi ukusebenzisa IDRA-21. Iziphumo ebezingalindelekanga akufuneki, nangona kunjalo zikoyike; ichiza linokubakho kakhulu, kwaye izibonelelo ziyayongamela iziphumo ebezingalindelekanga. Akunakulindeleka ukuba ungabinangxaki yazo naziphi na, ukuba ukhe wahlaselwa sisifo soqhwa mva nje, kufanelekile ukukuphepha ukusebenzisa eli chiza njengoko kunokwenza imeko yakho ibe mandundu.
Izifundo / uphando kwi-IDRA-21
Kwizifundo ezidlulileyo zenziwe kwi-IDRA-21 amandla kunye nendlela esebenza ngayo kwi-AMPA. I-IDRA-21 yavavanywa kwiigundane zaselebhu ezazifanele ukudlula umgama wamanzi. Kwaqwalaselwa ukuba iigundane zenziwa kunye IDRA-21 yenziwe kakuhle kakhulu ngokuthelekiswa nezo zingakhange zenze. Bakuqinisekisile oku ngokufikelela kumazizo wokuqala ophumayo. Iziphumo ze-IDRA-21 kunye ne-huperzine kwimemori yokuqonda ebonakalayo kwii-macaque ezisencinci zasetyenziswa ukuvavanya ukusebenza kwayo.
Uvavanyo lwe-IDRA-21 lomgubo
Ukonyusa ukugxila kwengqondo kunye noxinzelelo U-Edwin R. uthi, “Le nootropic ibetha zonke ezinye izinto ekugcineni enye ijolise engqondweni. Ndingayingqina le nto kuba ukusukela oko ndiqalisile ukuyithatha, ndiqaphele umahluko omkhulu kwindlela endifunda ndisebenza ngayo. Ndenza ukufunda okuninzi emva komsebenzi, kwaye ngaphambili, andikwazi ukunika ingqalelo eyaneleyo. Ndihlala ndisilela kwenye, kodwa oku akunjalo kule mihla. Umphathi wam undixelela ukuba ndisebenze nzima ngelixa utitshala wam esithi ngoku ndingumfundi ojolise ngakumbi. Ndiyayithanda nento yokuba ukuthatha i-IDRA-21 kulunge kakhulu kum kuba ndiyithatha nangaliphi na ixesha lomhla ngeglasi yamanzi. I-IDRA-21 yeyona nto bendiyifuna. ” Undincedile ngokudakumba kancinci U-Essy J. uthi, "Kutshanje, bendiphantsi koxinzelelo olunjengomsebenzi ngenxa yoxinzelelo lomsebenzi wam, umntwana omtsha kunye nobomi obutsha obundibambisayo. Ndizamile iziyobisi ezimbalwa, kodwa akukho zibonakala zindenza ndizive ngcono. Ngethamsanqa, umhlobo undicebisile ukuba ndifanele bathenge i-IDRA-21 powder ukuzama ukulwa nokudakumba noxinzelelo. Ewe, ibisithathu kuphela kolu nyango, kwaye ibangele iziphumo ezilungileyo. Ngoku ndiyakwazi ukucinga ngokuthe ngqo yonke imini ngaphandle kokubandezeleka kukutshintsha kwemood. Ndingayincoma kuye nabani na oziva ngathi ufile. ” Incede intombi yam ukujongana nokulibala UWilliam S. uthi, “Intombi yam ine-ADHD ebukhali kwaye ukunikela ingqalelo nakwimizuzwana emihlanu ayingomsebenzi. I-IDRA-21 powder, nangona kunjalo, iye yasindisa ubomi kuba uxinzelelo lwayo luphuculwe kakhulu. Ukhumbula izinto ezingaphezulu kunangaphambili, enkosi kule mveliso. Ndiqaphele ukuba ayinampembelelo kuye, kwaye oku kuyenza ukuba ibe namanqaku nangakumbi. Enkosi IDRA-21, usana lwam ngoku lungaphila ubomi obuqhelekileyo. ”
Kuphi ukuthenga i-IDRA-21 powder?
Njengoko kubonwe kwinqaku, i-IDRA-21 iyakwazi ukunika ubomi bakho uguquko olupheleleyo. Ngaphandle kokwenza ukuba uvelise ngakumbi kwaye uqaphele, i-IDRA-21 inokukwenza ube nobomi obonwabisayo. Ndiyazi ngoku ungazibuza ukuba ungayifumana phi. Omnye wemiceli mngeni ebaluleke kakhulu ejongene nabantu kukufumana umthombo othembekileyo we-IDRA-21. Kungenxa yokuba le mveliso iguqukile yaba yinto enqabileyo kuthathelwa ingqalelo ukuba isekwizifundo zayo zokuqala zeklinikhi. Oko akuthethi, nangona kunjalo, kuthetha ukuba ngekhe ubeke izandla zakho kumgangatho we-IDRA-21. Ungahlala uhlala Thenga i-IDRA-21 online kwaye uyihambise kwindawo yakho. Ngaba le nto ayikukhuseli entloko yokuhamba uyokuya ezivenkileni uyokucela? Beka iodolo nathi namhlanje kwaye uqale uhambo lwakho ukuya kwisishukumiso esikhulu kunye nokuphuculwa kokusebenza.
Iziyobisi zokuphucula ukuqondisisa, zihlelwe nguJerry J. Buccafusco, iphepha 92-93
I-Ampakines: I-Ampakine, i-Cx717, i-Idra-21, i-Ly-503,430, i-Aniracetam, i-Pepa, i-Farampator, i-Cx-516, i-Unifiram, i-Sunifiram, i-LLC Iincwadi, i-General Books LLC, i-2010, iphepha 1-36
Impilo kunye neziyobisi: Isifo, amayeza kunye noNyango nguNicolae Sfetcu
1.Yintoni i-IDRA-21 powder?
2. Isebenza njani i-IDRA-21?
Isisombululo esinconywayo / esisebenzayo se-IDRA-3
4. Ziziphi izibonelelo ze-IDRA-21?
Iziphumo ezibi zeIDRA-5
6. Izifundo / uPhando nge-IDRA-21
7.IDRA-21 powder Ukuhlaziywa
8.Uphi ukuthenga i-IDRA-21 powder?